Wasiir Fiqi “Odayaasha aaday Al-Shabaab yeysan noo soo noqon, haku biiraan, dagaalkana ha soo galaan” - Awdinle Online
Wasiir Fiqi “Odayaasha aaday Al-Shabaab yeysan noo soo noqon, haku biiraan, dagaalkana ha soo galaan”
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa digniin u diray Odayaasha dhaqameedyo ku dhaqan Gobolka Mudug ee dhowaan Al-Shabaab ugu yeereen deegaanada ay ka taliyaan, isagoo in aanan la aqbalin in odayaashaas ay fuliyaan awaamiirta Al-Shabaab, ayna dib ugu soo laabtaan deegaanada Maamulka Galmudug.
Fiqi ayaa sheegay in odayaasha laga wacay deegaanada Al-Shabaab lagu amray in aanay hubka dhigin oo aanay xareyn maleeshiyaadka, isagoo xusay in Al-Shabaab ay yihiin kuwo ka dambeeyay iska hor-keenka beelaha iyo dagaal beeleedyada ka dhacay Mudug.
“Waxaa maqalnay in odayaasha in odayaasha qabaa’ilka in laga wacay deegaanada Al-Shabaab, haddii ay tagaan waxba kama soo noqonayaan, kamana duwana Argagixisada”ayuu yiri Axmed Fiqi.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in aanay suura gal aheyn in odayaasha dhaqanka ee aada deegaanada Al-Shabaab inay inta dib u soo laabtaan iska joogaan deegaanada maamulka Galmudug, iyagoo ku shaqeynaya tilmaamihii Al-Shabaab.
“Yeysan noo soo noqon Al-Shabaab haka mid noqdaan, haku biiraan, dagaalkana ha soo galaan, laakiin suurta gal ma ahan oday ku shaqeynaya tilmaamihii Al-Shabaab inuu na dhex joogo inuu xoriyad ku soo laabto uu noo yimaado”ayuu yiri.
Wasiirka Amniga Galmudug ayaa todobaadyadii u dambeeyay waday dadaalo la xiriiray amniga deegaanada maamulka, isagoo ku guuleystay in maleeshiyooyinka hubeysan ee deegaanada la xareeyo, hubkana laga dhigo.
Previous articleCiidamada ammaanka Galmudug oo toogtey madaxii amniyaadka Al Shabaab ee Gaalkacyo
Next articleKoofur Galbeed oo beenisay Carqaladeyta shirkii DF iyo Dowlad Goboleedyada